Ɔhene Belsasar tow pon (1-4)
Nsa bi kyerɛw biribi wɔ ɔfasu ho (5-12)
Wɔka kyerɛɛ Daniel sɛ ɔnkyerɛ nkyerɛwee no ase (13-25)
Nea ɛkyerɛ: Babilon bɛsɛe (26-31)
5 Ɔhene Belsasar+ tow pon kɛse bi maa n’abirɛmpɔn 1,000, na ɔnom nsã wɔ wɔn anim.+ 2 Bere a nsã no bow Belsasar no, ɔkae sɛ wɔmfa sika kɔkɔɔ ne dwetɛ nneɛma a ne papa* Nebukadnesar kɔfa fii Yerusalem asɔrefi hɔ bae no mmra,+ na ɔhene ne n’abirɛmpɔn, ne ne mpenafo,* ne ne yerenom nkumaa no nnom mu. 3 Ɛnna wɔde nneɛma a wɔde sika kɔkɔɔ ayɛ a wɔkɔfa fii Onyankopɔn asɔrefi a ɛwɔ Yerusalem no bae, na ɔhene ne n’abirɛmpɔn, ne ne mpenafo, ne ne yerenom nkumaa no nom mu. 4 Wɔnom nsã, na wɔkamfoo anyame a wɔde sika kɔkɔɔ, ne dwetɛ, ne kɔbere, ne dade, ne dua, ne abo ayɛ no. 5 Prɛko pɛ na onipa nsateaa bi bae, na efii ase kyerɛw ahemfi no fasu ho, baabi a ɛne kaneadua no di nhwɛanim no. Bere a nsa no rekyerɛw no, na ɔhene hu nsa no akyi. 6 Ɛnna ɔhene yɛɛ hoyaa,* na nneɛma a ɔredwen ho wɔ ne tirim no ma ɔbɔɔ hu, na n’asen mu hodwowee,+ na ne nkotodwe keka boom. 7 Ɔhene teɛɛm denneennen sɛ wɔnkɔfa nkonyaayifo, Kaldeafo,* ne nsoromma mu ahwɛfo no mmra.+ Na ɔhene ka kyerɛɛ Babilon anyansafo no sɛ: “Obiara a ɔbɛkan nkyerɛwee yi na wakyerɛ me ase no, wɔde ntama afasebiri befura no, na wɔde sika kɔkɔɔ kɔnmuade begu ne kɔn mu,+ na ɔbɛyɛ nea ɔto so abiɛsa a obedi tumi wɔ ahenni yi mu.”+ 8 Ɛnna ɔhene anyansafo no nyinaa bae, nanso wɔantumi ankan nkyerɛwee no, na wɔantumi ankyerɛ ase ankyerɛ ɔhene.+ 9 Enti Ɔhene Belsasar bɔɔ hu paa, na n’anim yɛɛ hoyaa; na n’abirɛmpɔn no ho yeraw wɔn.+ 10 Ɔhene ne n’abirɛmpɔn nsɛm no nti, ɔhemmaa no baa apontow dan no mu. Na ɔhemmaa no kae sɛ: “O ɔhene, nya nkwa daa! Mma nneɛma a woredwen ho wɔ wo tirim no mmmɔ wo hu, na mma w’anim nnyɛ hoyaa. 11 Ɔbarima* bi wɔ w’ahenni mu a ɔwɔ anyame kronkron no honhom. Wo papa bere so no, wohui sɛ ɔwɔ nimdeɛ ne nhumu ne nyansa a ɛte sɛ anyame nyansa.+ Wo papa, Ɔhene Nebukadnesar, de no sii akɔmfo, nkonyaayifo, Kaldeafo,* ne nsoromma mu ahwɛfo no so panyin.+ Ɔhene, wo papa na ɔyɛɛ no saa. 12 Daniel a ɔhene too no din Beltesasar no,+ na onim ade paa, na na ɔwɔ nimdeɛ ne nhumu a wɔde kyerɛ dae ne akasabebu* ase, nimdeɛ ne nhumu a wɔde kyerɛkyerɛ nsɛm a emu yɛ den mu.*+ Enti ma wɔnkɔfrɛ Daniel mmra, na ɔbɛkyerɛ ase akyerɛ wo.” 13 Ɛnna wɔde Daniel baa ɔhene anim. Na ɔhene bisaa Daniel sɛ: “Wone Daniel anaa? Woka nkurɔfo a me papa ɔhene atu wɔn ase afi Yuda de wɔn aba ha no ho?+ 14 Mate wo nka sɛ wowɔ anyame no honhom,+ na wɔahu sɛ wowɔ nimdeɛ ne nhumu, na wowɔ nyansa a ɛkyɛn so.+ 15 Wɔde anyansafo ne nkonyaayifo no baa m’anim sɛ wɔmmɛkenkan nkyerɛwee yi na wɔnkyerɛ me ase, nanso wɔantumi ankyerɛ asɛm no ase.+ 16 Nanso mate wo nka sɛ wutumi kyerɛ nsɛm ase,+ na wutumi kyerɛkyerɛ nsɛm a emu yɛ den mu.* Enti sɛ wutumi kenkan nkyerɛwee yi na wokyerɛ me ase a, wɔde ntama afasebiri befura wo, na wɔde sika kɔkɔɔ kɔnmuade begu wo kɔn mu, na wobɛyɛ nea ɔto so abiɛsa a obedi tumi wɔ ahenni yi mu.”+ 17 Ɛnna Daniel ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Ma w’akyɛde no nwɔ hɔ, na fa w’akyɛde no ma nnipa foforo. Nanso, mɛkenkan nkyerɛwee no akyerɛ ɔhene, na mama woahu ne nkyerɛase. 18 Ɔhene, Ɔsorosoroni Nyankopɔn no de ahenni ne kɛseyɛ ne nidi ne tumi maa wo papa Nebukadnesar.+ 19 Kɛseyɛ a Ɔde maa no nti, nkurɔfo, aman, ne nnipa a wɔka kasa horow nyinaa ho popoe wɔ n’anim na wosuroo no.+ Obiara a ɔpɛ no, okum no, na obiara a ɔpɛ no, ɔma ɔtenaa ase; obiara a ɔpɛ no, ɔmaa no so, na obiara a ɔpɛ no, ɔbrɛɛ no ase.+ 20 Nanso bere a ne koma maa ne ho so na ne honhom yɛɛ den ma ɔyɛɛ ahantan no,+ wotuu no fii n’ahengua so, na wogyee n’anuonyam fii ne nsam. 21 Wɔpam no fii nnipa mu, na wɔmaa ne koma yɛɛ sɛ aboa de, na wuram mfurum na ɔne wɔn tenae. Ɔwee wura sɛ nantwi, na ɔsoro bosu fɔw ne honam, kosii sɛ ohui sɛ Ɔsorosoroni Nyankopɔn no na odi nnipa ahenni so tumi, na ɔde ma obiara a ɔpɛ.+ 22 “Na wo, ne ba* Belsasar, wunim eyinom nyinaa, nanso woammrɛ wo koma ase. 23 Mmom, Ɔsoro Wura no na woama wo ho so atia no,+ na woama wɔde ne fi nneɛma abrɛ wo.+ Na wo ne w’abirɛmpɔn, ne wo mpenafo, ne wo yerenom nkumaa anom mu nsã, na woakamfo anyame a wɔde dwetɛ ne sika kɔkɔɔ, kɔbere, dade, dua, ne abo ayɛ no, anyame a wonhu ade na wɔnte asɛm na wonnim hwee no.+ Na Onyankopɔn a wo home+ ne w’akwan nyinaa wɔ ne nsam no de, woanhyɛ no anuonyam. 24 Enti ɔno na ɔsomaa nsa yi ma ɛbɛkyerɛw nkyerɛwee yi.+ 25 Na nsɛm a ɛkyerɛwee no ni: MENE, MENE, TEKEL, ne PARSIN. 26 “Nsɛm no nkyerɛase ni: MENE, Onyankopɔn akan nna a w’ahenni bedi, na ɔde aba awiei.+ 27 “TEKEL, wɔakari wo wɔ nsenia* mu, na wɔahu sɛ wunnu baabiara. 28 “PERES, wɔakyɛ w’ahenni mu de ama Mediafo ne Persiafo.”+ 29 Ɛnna Belsasar kae ma wɔde ntama afasebiri furaa Daniel, na wɔde sika kɔkɔɔ kɔnmuade guu ne kɔn mu; na wɔbɔɔ dawuru sɛ ɔno na ɔbɛyɛ nea ɔto so abiɛsa a obedi tumi wɔ ahenni no mu.+ 30 Saa anadwo no ara, wokum Kaldeafo hene Belsasar.+ 31 Na wɔde ahenni no maa Mediani Dario.+ Saa bere no, na wadi bɛyɛ mfe 62.
^ Anaa “ɔhene anim sesae.”
^ Kyerɛ sɛ, nnipakuw bi a wɔaben wɔ abisa ne nsoromma mu hwɛ mu.
^ Anaa “Ɔbarima mmɔdenbɔfo.”
^ Nt., “wɔde san apɔw.”
^ Nt., “wutumi san apɔw.”